मधुमेह रोगीले खान हुने र खान नहुने खानेकुराहरु ! « News24 : Premium News Channel
मधुमेह रोगीले खान हुने र खान नहुने खानेकुराहरु !
मधुमेहलाई अङ्ग्रेजीमा डायबिटिज भनिन्छ भने सामान्य भाषामा चिनीरोग भन्ने गरिन्छ । मधुमेह रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढि भएपछि हुने रोग हो ।
विशेषगरी मधुमेहको नियन्त्रणमा दैनिक खाने खानाले ठूलो प्रभाव पारेको हुन्छ । दैनिक भोजन सन्तुलित राख्न सकेमा रगतमा चिनीको परिमाण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
संयमित एवं सन्तुलित खानपान, नियमित व्यायाम र आवश्यकता अनुसारको सही औषधि वा इन्सुलिनको प्रयोग गरेर मधुमेहलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ । मधुमेहका रोगीले सकेसम्म सबैले पनि खानुपर्ने खाना भनेको ‘सन्तुलित खाना नै हो।
६. नुुन कम खानु